मलाइ त लट्ठी पनि भांचु भांचु लागेको छ । अब सबै चाकडीबाज कसलाई गाली गर्नु ! सबै सर्पको विष निस्केकै राम्रो । केहि परिवर्तन हुन्छ, हुनै पर्छ तर परिवर्तन राम्रोका लागि होस।
खै के बुझ्थे राम्रो कुरा हाम्रो नेताजी हरु ले ! बुझेर पनि बुझ पुचाउछन अब ! सत्ता सोम रस मा डुबे पछी अनौठो रोग लाग्दो रहेछ नि !
हाम्रा राम्रा नेताजी हरु को बिश्बास लाग्न छोड्यो तर बिकल्प पनि छैन नेता ज्यु नभनी !
को छन त खै अहिले सम्म साच्चैको गर्ब गर्न लायक का नेताजी !
यि सप्पै मुलुक डुबाउने मा परे ! ईतिहास ले सदा सराप्ने छ यिनलाई !
( अरु के पो भन्नु त खोइ ! )